လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ညီအစ်ကိုအရင်းလို ချစ်ခင်ရတဲ့ညီလေးတစ်ယောက် ကြွေလွင့်သွားခဲ့အတွက် စိတ်ထိခိုက်နေတဲ့ G Fatt – Cele Top Stars
လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ညီအစ်ကိုအရင်းလို ချစ်ခင်ရတဲ့ညီလေးတစ်ယောက် ကြွေလွင့်သွားခဲ့အတွက် စိတ်ထိခိုက်နေတဲ့ G Fatt
March 28, 2021 By admin2Knowledge
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..အဆိုတော် G Fattဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုလက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားတွေမှာ ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ရက်ဆက် မမောနိုင် မပန်းနိုင်အောင် လမ်းပေါ်ထွက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေရုံတင်မကဘဲ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း Defense Team မှ လူငယ်တွေနဲ့အတူ ရှေ့ဆုံးက နေထွက်ကာ ကာကွယ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်းလောက်ကလည်း G Fatt ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ စိတ်မကောင်းစရာသတင်း တစ်ခုရေးသား ဝေမျှပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဒီကနေ့မှာဘဲ ချစ်ခင်ရတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်ကျ ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းနေပြီး သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” သွားနှင့်တော့ ညီလေး ဖီဖီရေ . ၁၆ /၃ အတွက်ငါဂုဏ်ယူတယ်ညီလေး ။ အထက ၂ သပိတ်ကြောင်းတူတူထွက်ဖူးတဲ့ညီလေး … မင်းအစ်ကို ခင်ရှင်းလေးတော့ ပေါက်ကွဲနေရော့မယ်ကွာ ..ခင်ရှင်းလေးရေ ကိုကြီးတို့ မင်းညီအတွက် အဆုံးထိတိုက်မှာပါကွာ မင်းဘယ်လောက်နာကျင်နေမလဲ ငါခံစားမိပါတယ် စတွေ့တည်းက တက်ကြွပြီး ရိုးသားတဲ့ညီငယ်တွေနဲ့ အတူတူ ရုန်းခွင့်ရတာ ငါဂုဏ်ယူပါတယ် ဒီနေ့တော့ ငါ ငိုင်ကျသွားတော့တာပါပဲကွာ .. ငါတို့မင်းအတွက် တာဝန်ကျေစေရမယ်ညီလေး ..
ဒီအရေးတော်ပုံမှာ မင်းရိုက်ပေးတဲ့ဓါတ်ပုံတွေငါတင်ဖူးပေါ့ကွာ ..ထ၂ သပိတ်ကြောင်းမှာ မင်းရှေ့က ပြေးလိုက်ပုံရိုက်လိုက် ငါမျက်လုံးထဲကမထွက်ဖူးကွာ .. မင်းက ၁၆ရပ်ကွက်ရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ သူရဲကောင်းပါညီလေး ငါဦးညွှတ်ပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ညီတွေလဲ နောက်နေ့တွေဂရုစိုက်ပါကွာ ငါတို့ထပ်မပေးပါရစေနဲ့တော့ ငါလည်း ဘာပြောရမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးကွ ငါရပ်ကွက်ထဲအတူမရှိပေးနိုင်ခဲ့တာ တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ ။ ငါတတ်နိုင်တာ အကုန်ဝင်ကူပါ့မယ် ကွာ ။ #အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးပါစေ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကိုတစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
ဒါကတော့ ဒီကနမှေ့ာဘဲ ခဈြခငျရတဲ့ ညီလေးတဈယောကျကြ ဆုံးသှားခဲ့တဲ့အတှကျ စိတျထိခိုကျဝမျးနညျးနပွေီး သူနဲ့ပတျသကျတဲ့ အမှတျတရလေးတှကေို ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ” သှားနှငျ့တော့ ညီလေး ဖီဖီရေ . ၁၆ /၃ အတှကျငါဂုဏျယူတယျညီလေး ။ အထက ၂ သပိတျကွောငျးတူတူထှကျဖူးတဲ့ညီလေး … မငျးအဈကို ခငျရှငျးလေးတော့ ပေါကျကှဲနရေော့မယျကှာ ..ခငျရှငျးလေးရေ ကိုကွီးတို့ မငျးညီအတှကျ အဆုံးထိတိုကျမှာပါကှာ မငျးဘယျလောကျနာကငျြနမေလဲ ငါခံစားမိပါတယျ စတှတေ့ညျးက တကျကွှပွီး ရိုးသားတဲ့ညီငယျတှနေဲ့ အတူတူ ရုနျးခှငျ့ရတာ ငါဂုဏျယူပါတယျ ဒီနတေ့ော့ ငါ ငိုငျကသြှားတော့တာပါပဲကှာ .. ငါတို့မငျးအတှကျ တာဝနျကစြေရေမယျညီလေး ..
ဒီအရေးတျောပုံမှာ မငျးရိုကျပေးတဲ့ဓါတျပုံတှငေါတငျဖူးပေါ့ကှာ ..ထ၂ သပိတျကွောငျးမှာ မငျးရှကေ့ ပွေးလိုကျပုံရိုကျလိုကျ ငါမကျြလုံးထဲကမထှကျဖူးကှာ .. မငျးက ၁၆ရပျကှကျရဲ့ တဈနိုငျငံလုံးရဲ့ သူရဲကောငျးပါညီလေး ငါဦးညှတျပါတယျ ။ ကနျြတဲ့ညီတှလေဲ နောကျနတှေ့ဂေရုစိုကျပါကှာ ငါတို့ထပျမပေးပါရစနေဲ့တော့ ငါလညျး ဘာပွောရမှနျးကိုမသိတော့ပါဘူးကှ ငါရပျကှကျထဲအတူမရှိပေးနိုငျခဲ့တာ တောငျးပနျပါတယျကှာ ။ ငါတတျနိုငျတာ အကုနျဝငျကူပါ့မယျ ကှာ ။ #အာဏာရှငျစနဈကဆြုံးပါစေ ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပွီး ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီသတငျးလေးကိုတဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကိုအထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ…။
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင် အဆိုတော်ထူးအယ်လင်းရဲ့ အစ်မ၊ အစ်ကိုနဲ့ညီ သေနတ်နဲ့အပစ်ခံရပြီး အစ်မဖြစ်သူ မဥမ္မာရှိန် သေဆုံး
အရေးတော်ပုံအောင်မြင်သွားရင် သူမပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်တွေကို ပြောပြရင်း မသိနားမလည်ခဲ့တာတွေကို တောင်းပန်လိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု